vehivavy malagasy – Blaogin'i Voniary
Étiquette : vehivavy malagasy
Xena Zen Aom (Amour) : « Tsy misy na iza na iza manana alalana hanimba ny fonao !»
Antsafa niarahana tamin'i Xena Zen Aom (Amour), mpanabe amin'ny fampivoaran-tena sy fivelaram-panahy. Olona falifaly sy mitsikitsiky lava.
Torohevitra momba ny toe-tsaina, toe-po ary toe-panahy tsara hananana rehefa mitondra vohoka entin’i Voniary.
8 marsa – Hafatra tsy misorona avy amin’i Damy Govina
Lainga izany hoe efa nihaona tamin’i Damy Govina ianao ka hohadinoinao izy, na tsy niresaka mivantana taminy aza ianao. Vehivavy misongadina lalandava izy amin’izy rehetra alehany, tsy misalasala ny mametraka ny maha izy azy. Asa noho izy tsy misorona angaha : maneho ny heviny tsy miolakolaka, milaza ny marina tsy mialokaloka ao anaty voambolana voasarontsarona? Mampihomehy,... Lire la Suite →